Meeshaaleen Wal’aansa Fayyaa Akkaan Barbaachisoo Ta’an Kaaba Itiyoophiyaa Bakka Wal Waraansi Keessa Jiru Dhaqqabaa Hin Jiru
FAAYILII - Namoonni gabaa magaala Yechilaa irraa deebi'an Tigraay, Adoolessa 10, 2021.
Wabii nageenyaa dhabamuu fi rakkoon birokraasii mudate meeshaalee wal’aansa fayyaa fi gargaarsa akkaan barbaachisaa ta’an kanneen biroo siviloota miliyoona hedduu haala rakkisaa keessa jiran dhaqqabsiisuu danee jira jechuu dhaan angawoonni jarmayaa fayyaa addunyaa beeksisani jiru.
Lisa Shilaayin Jenevaa irraa akka gabaastetti kaaba Itiyoophiyaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessaa uummati miliyoonni 9.4tti tilmaamamu gargaarsa namoomaatu isaan barbaachisa. Kannen miliyoonaan laka’aman immoo hanqina nyaataa hamaan rakkataa jiru. Hanqinni nyaata madaalamaa dabalaa, dhukkubii fi dhibeen wal’aanamuu danda’u wal’aansa argataa hin jiran.
Jarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhetti gareen eegumsa fayyaa fi nyaata madaalamaa raabsan kan bakkaa bakkatti sosso’an naannolee sadan keessaa hojjechaa ka jiran ta’uu gabaase. Haa tau malee amma iyyuu namoota wal’aanuun rakkisaa dha. Meeshaaleen wal’aansa fayyaa fi dhiyeessiin isaa, talaalliiwwanii fi dawaaleen namoota isaan barbaachisu dhaqqabaa hin jiran. Dubbi himaan WHO Christian Lindmeier akka jedhanitti haalli Tigraay keessaa yaaddessaa dha.